Kenya oo ku dhawaaqday mowqif adag oo ku saabsan muranka badda ee ka dhexeeya Soomaaliya | Radio Hormuud
Dowladda Kenya ayaa si cad u sheegtay in aaney Soomaaliya marnaba gacanta u gallin doonin xitaa qeyb yar oo ka mid ah dhulka ay ku fadhido xuduudda badda ee ay ku muransan yihiin.
"Ma jirto dowlad aan ku wareejineyno taako ka mid ah dhulka ay Kenya leedahay", ayey tidhi Ambaasadoor Monica Juma.
uma ayaa sheegtay in Kenya ay wali Soomaaliya ka sugeyso jawaab faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha ugu waaweyn ee lasoo hadal qaaday, iyadoo dhanka kalena xustay in Kenya ay aad isugu dayeyso iney "isxakameyso", oo aaney wax tallaabo xad-dhaaf ah qaadin.
"Dalal ayaa dagaal u galay wax aad uga yar arrintan oo kale", ayey tidhi Ms Juma.
Wasiiradda oo ka hadleysay shir jaraa'id oo ay warbaahinta u qabatay ayaa hoosta ka xariiqday in ay jiri karto cunaqabateyn ay ku soo rogaan Soomaaliya, taasoo ku xiran hadba sida ay noqoto jawaabta ay xukuumadda Muqdisho ka bixiso sharraxaadda laga dhowrayo.
Qeyb ka mid ah sharraxaadda ay Soomaaliya ka sugayaan ayey sheegtay in ay tahay raalli galin laga doonayo in Soomaaliya ay siiso Kenya.
Muranka culus ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku saabsan afar waaxood oo ka mid ah dhulka ay badda ku fadhido ee u dhow xadka biyaha ee kala qeybiya labada waddan.
Dacwad ku saabsan murankan ayaa hor taalla maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda(ICJ), taasoo laga dhowrayo iney dhageysato, ka dibna go'aan kasoo saarto.
Xidhiidhka Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumeyd gaadhay Sabtidii lasoo dhaafay, kadib kolkii ay Kenya amar ku bixisay in Safiirkii Soomaaliya ee Nairobi ku sugnaa uu dib ugu laabto Muqdisho, iyadoo sidoo kalena u yeedhatay danjiraheedii Soomaaliya kafadhiyay.
Seks kandidater har meldt sig til at tage over efter May
Ny EP-måling: Folkebevægelsen mod EU står til at beholde mandat
Pia Kjærsgaard kritiserer fokus på 16-årig klimaaktivist - påfører andre angst